Foomamka Gaadiidka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waxaan geynay dhammaan foomamka la xiriira gaadiidka ee aad u baahan karto hal meel oo ku habboon. Si fudud u dooro foomka aad hoosta uga baahan tahay oo ama soo degso foomka ama ku dhig codsigaaga khadka tooska ah.
Codsiga Sanadlaha ah ee Xannaano-maalmeedka / Diiwaangelinta Kale / Furan: Haddii cunug lagu qaado ama lagu dejiyo baska meesha aan ahayn guriga si joogto ah, hal maalin ama ka badan usbuucii.
Axdiga iyo Macluumaadka Safarka Goobta: Jaartarka iyo tilmaamaha safarka dibedda waa in loo qaybiyo shaqaale kasta oo baska u adeegsanaya howlaha manhajka dheeriga ah.
Qiyaasta Kharashaadka ka-baxsan manhajka: Foomka ka-baxsan manhajka waxaa loo isticmaalaa in lagu qiyaaso kharashka socdaallada dhulka, iwm.
Foomka Mas'uuliyadda: Haddii ay dhacdo in waalidku (waalidku) ay u soo kaxeeyaan ama u kaxeeyaan waxqabadyada dugsiga, foomkan waa in la adeegsadaa. Hubinta liisanka waa in lagu sameeyaa darawal kasta oo u baahan inuu ka faa'iideysto doorashadan.
Dib-u-bixinta Lacagta Gaadiidka Dadweynaha ee Dibedda: Qoysaska carruurta u kaxeeya dugsiyada aan dawliga ahayn ee ka baxsan Degmadda Minnetonka.
Diiwaangelinta Khidmadda Gaadiidka: Ardayda deggan wax ka yar laba mayl dugsiga ayaa lagu dhiirrigelinayaa inay iska diiwaangeliyaan adeegga baska; kharash $ 100 / ardayga, ugu badnaan $ 250 qoyskiiba; la dhammaystiray lana soo gudbiyey ka hor intaan dugsigu bilaabmin.